Fiampangana an’i Paoly (1-9)
Fiarovan-tenan’i Paoly teo anatrehan’i Feliksa (10-21)
Nihantona roa taona ny fitsarana an’i Paoly (22-27)
24 Rehefa afaka dimy andro, dia nidina tany Kaisaria i Ananiasy+ mpisoronabe sy ny anti-panahy sasany ary ny mpisolovava* iray atao hoe Tertylo, ka niampanga an’i Paoly tamin’ny governora.+ 2 Rehefa nantsoina i Tertylo, dia nanomboka niampanga azy hoe: “Milamina tsara ny eto aminay noho ianao, ry Feliksa Governora hajaina ô, ary tena mahay mitsinjo ny hoavy ianao ka mitondra fivoarana eto amin’ity firenena ity. 3 Miaiky an’izany daholo izahay hatramin’izay ary na aiza na aiza, ry Feliksa Governora hajaina ô, ka tena mankasitraka be dia be anao. 4 Mba tsy hihazonana anao maharitra anefa, dia miangavy anao aho mba ho tsara fanahy aminay ka hihaino anay vetivety. 5 Hitanay mantsy fa mpanakorontana* io lehilahy io,+ ka ampirisihiny hikomy amin’ny fanjakana+ ny Jiosy rehetra manerana ny tany,* ary izy no mitarika an’ilay sektan’ny Nazareanina.+ 6 Nitady hanazimbazimba ny tempoly koa izy ka nosamborinay.+ 7 *—— 8 Ho hitanao fa marina izany zava-drehetra iampanganay azy izany rehefa ataonao famotorana izy.” 9 Ary niampanga azy koa ny Jiosy ka nanizingizina fa marina daholo izany. 10 Rehefa nanao fihetsika tamin’ny lohany ny governora mba hanomezana fitenenana an’i Paoly, dia namaly i Paoly hoe: “Fantatro tsara fa efa an-taonany maro ianao no mpitsaran’ity firenena ity. Koa faly aho hilaza aminao ny fiarovan-tenako.+ 11 Azonao hamarinina koa fa tsy mihoatra ny 12 andro izay no niakarako hivavaka tany Jerosalema.+ 12 Ary tsy nahita ahy niady hevitra tamin’olona tao amin’ny tempoly ireo na nampirisika ny vahoaka hirotaka, na tao amin’ny synagoga izany na eran’ny tanàna. 13 Tsy afaka manaporofo an’ireo zavatra iampangany ahy izao koa ry zareo. 14 Ekeko eto anatrehanao anefa, fa mifanaraka amin’ilay antsoin’izy ireo hoe ‘sekta’* no anompoako ny Andriamanitry ny razambeko,+ satria mino an’izay rehetra voalazan’ny Lalàna sy voasoratra ao amin’ny Mpaminany+ aho. 15 Ary manantena hoatr’azy ireo koa aho fa hatsangan’Andriamanitra+ ny marina sy ny tsy marina.+ 16 Izany no mahatonga ahy hiezaka foana hanana feon’ny fieritreretana madio* eo anatrehan’Andriamanitra sy ny olona.+ 17 Tonga eto amin’ny fireneko aho izao, taona maro atỳ aoriana, mba hitondra fanomezana ho fiantrana ny mahantra+ sy hanao fanatitra. 18 Teo am-panaovana an’izany aho no hitan-dry zareo tao amin’ny tempoly. Efa nadio araka ny takin’ny Lalàna aho tamin’izay,+ ary tsy niaraka tamin’olona be dia be na nahatonga korontana. Fa nisy Jiosy avy any amin’ny faritanin’i Azia tao, 19 ary ry zareo no tokony ho tonga hiampanga ahy eto anatrehanao raha tena misy zavatra iampangany ahy!+ 20 Na aleo ireto olona manatrika eto ireto no hilaza an’izay ratsy hitany nataoko tamin’izaho nijoro teo anatrehan’ny Fitsarana Avo Jiosy. 21 Raha tsy hoe ilay zavatra noteneniko tamin’izaho nijoro teo anatrehan’izy ireo angaha no noheverin’izy ireo hoe ratsy nataoko, dia ilay teniko hoe: ‘Ny momba ny fitsanganana amin’ny maty no itsarana ahy eto anatrehanareo anio!’”+ 22 Nampihemotra an’ilay raharaha anefa i Feliksa, izay nahalala tsara ny amin’izany Lalana*+ izany, ka niteny hoe: “Rehefa midina atỳ i Lysia mpitari-tafika vao hanapa-kevitra ny amin’ity raharahanareo ity aho.” 23 Ary nomeny baiko ilay manamboninahitra mba hitana an’i Paoly, nefa koa hamela azy hanao zavatra sasany, ary hamela ny namany hikarakara azy. 24 Ary tonga i Feliksa andro vitsivitsy taorian’izay, niaraka tamin’i Drosila vadiny, izay Jiosy. Dia nampaka an’i Paoly izy ka nihaino azy niresaka momba ny finoana an’i Kristy Jesosy.+ 25 Rehefa niresaka momba ny atao hoe mety sy tsy mety sy ny fifehezan-tena ary ny fitsarana ho avy+ anefa i Paoly, dia natahotra i Feliksa ka niteny hoe: “Mandehana amin’izay aloha, fa mbola hampaka anao ihany aho rehefa misy fotoana.” 26 Nanantena koa anefa izy hoe homen’i Paoly vola, ka izany no nahatonga azy hampaka azy matetika kokoa sy hiresaka taminy. 27 Roa taona tatỳ aoriana anefa, dia nandimby an’i Feliksa i Porsio Festosy. Ary navelan’i Feliksa tao am-ponja i Paoly, satria te hahazo sitraka tamin’ny Jiosy+ izy.
^ Abt: “mpandahateny.”
^ Abt: “areti-mandringana.”
^ Na: “tany misy mponina.”
^ Na: “tsy misy tsininy.”